Faritra atsimo: Ho foanana ny Kere, ampidirina ny rano, asiana barazy ny Reniranon'i Mandrare
vendredi, 22 juin 2018 11:44
Fantatry ny rehetra fa ny faritra atsimon'ny Nosy, Androy, Amboasary atsimo, Ambovombe, Antanimora, Bekily, Beraketa, Bekitro, Jafaro, Beloha, Tsihombe, hatrany Faux Cap dia kere sy tsy misy rano madio fisotro sy ambolena avokoa. Manjaka ny dahalo, tsy misy ny fandriam-pahalemana, ratsy ny làlana.
Ny rano anefa dia betsaka tokoa amin'iny faritra iny, fa tsy voafehy, ka mivarina andranomasina avokoa. Porofon'izany ny habehan'ny renirano toy an'i Mandrare, izay mivelatra nefa mora ritra.
Ny harena ankibon'ny tany dia feno, nefa manjaka tokana ny vahiny sy ireo mpandroba malagasy miray tsikombakomba aminy.
Ao anatin'ny tetikasa "Vitatsika io" dia amboarina ny Canal des Pangalanes, izay hiainga avy any amin'ny Cap d'Ambre Antsiranana, ary amakivaky ny ilany atsinanan'ny Nosy andalo an'ny Mananjary, Manakara, Farafangana, Vaingaindrano, Manantenina, Tolagnaro, Amboasary Atsimo, Ambovombe, Faux Cap ary hifarana eo amin'ny tendrony atsimon'ny Madagasikara, Cap Sainte-Marie.
Asiana barazy lehibe eo amin'ny reniranon'ny Mandrare, izay hamatsy herin'aratra, hanome rano fisotro madio ho an'ny mponina sy ny biby fiompy, anondraka tanimboly misy velarana 100 000Ha, ary tanimbary 10 000 Ha.
Hisy pipeline na fantsona vaventy kosa amatsy rano ireo faritra rehetra manodidina.
Ity tetikasa ity dia itambatra amin'ny tetikasa Canal des Pangalanes, izay hisy fambolena sy fiompiana goavana ny ilany atsinanan'ny Madagasikara manontolo, hisy indostria, ary hisy nouvelle ville isaky ny 50Km, izay hanorenana port fluvial sy trano ary tanàna vaovao.
Hisy moa ny autoroute anodidina an'i Madagasikara, ka ampitohy an'i Tolagnaro hatrany Toliara ary hiakatra any Morondava sy Menabe ary amakivaky an'ny Mahajanga, Maintirano ary hipaka any Antsiranana.
Hitentina eo amin'ny 90 milliards de dollars eo ny tetibidin'ity tetikasa goavana ity:
- 20 milliards $ Fanavaozana ny Canal des Pangalanes, miaraka amin'ireo fotodrafitrasa lehibe, na tetezana, na ny sisiny, na fanatsarana ny tontolo iainana, ny hotely, ny port fluvial;
- 15 milliards $ Ny fambolena sy fiompiana ary ny jono;
- 4 milliards $ Ny angovo sy ny internet ary ny fifandraisan-davitra;
- 1 milliard $ Fifandraisana amin'ny Sainte Marie;
- 1 milliard $ Sécurité, fanofanana sy fitaovana;
- 37 milliards $ Réseau ferré Pangalanes na lalamby misinina;
- 12 milliards $ Nouvelle ville, 200 000 logements, jiro, rano, fotodrafitrasa anaty tanàna, hopitaly, sekoly, tsena, toeram-pilalaovana, fanaovana fanatanjahan-tena, fialamboly, espace verte, reboisement fambolen-kazo...
2- Ny enti-manana sy famatsiam-bola:
Araka ny hitatsika eo ambony, dia ho faritra hitobian'ny famokarana izany ity faritra ilany atsinanana ity, fambolena sy fiompiana ary ireo vokatra fanondrana, ny harena ankibon'ny tany, ny andranomasina, ny indostria.
Hizara 4 ny famatsiam-bola:
* 40% Foibe;
* 10% Faritra (3);
* 20% isokatra amin'ny Malagasy rehetra na izay orin'asa mipetraka eto Madagasikara;
* 30% sokafana amin'ireo vahiny.
Ho tohanana manokana ny famokarana vanille, café, jirofo, letchi, manga, akondro, vary, paoma, voasary, ovy, katsaka, blé, oignon, black eyes, sakay sy épice, tsaramaso, kabaro, siramamy, éthanol, sisal, mangahazo, fary, ny fiompiana, ny jono, asa-tanana, ny tenona, ny sary sikotra, izay heverina hampiditra hatrany amin'ny 150 milliard $ ao anatin'ny 5 taona.
Anaovana indostria lehibe izany, na jus na confiture ka hidirana ny tsena iraisam-pirenena.
Ho jerena manokana ny fanavaozana ny fifanarahana momba ny fitrandrahana ankibon'ny tany rehetra, toa an'ny QMM. Tsy ekena ny redevance 1%.
3- Fiarovana ny Tontolo iainana sy ireo biby sarobidy toa ny sokatra
- Anisan'ny ezaka lehibe atao amin'ny faritra atsimo ny fambolen-kazo, izay tafiditra amin'ny tetikasa fikajiana ny tontolo iainana.
- Ao ihany koa ny politika amin'ny ady amin'ny valala.
- Fiarovana ny sokatra:
Ho enjana ny sazy ahazo ireo mpanao kolikoly sy mpanondrana ireo sokatra. Asiana ny politika momba ny fiompiana, mba tsy hinanan'ny olona ny sokatra izay harovana.
- Harovana toy izany koa ireo hazo sarobidy toy ny Mpanjakaben'ny Tany, ireo Baobab, ireo kolotsaina any Atsimo na ireo fasana maro samihafa.
Omena lanja manokana ireo fomba ampanao sy kolotsaina mampiavaka ny faritra atsimo.